Ogwe aka Type Blood Pressure Monitor
Infrared Fronthead temometa
Ọtụtụ ndị enyi na-ajụ dọkịta, gịnị kpatara dọkịta nke ụlọ ọgwụ ji amasị iji sphygmomanometer elektrọnik, mana na-akwụ onye ọrịa ụgwọ ka ọ laa n'ụlọ ya na sphygmomanometer elektrọnik?
N'ezie, nke a bụ nghọtahie anyị, enweghị iwu dị otú a, sphygmomanometer elektrọnik dị ugbu a na mercury sphygmomanometer nọ n'ogo nkịtị, dọkịta bụ ihe ọ ga - eji, ọ bụrụ na ndị ọrịa ga - eji mercury sphygmomanometer, nwekwara ike iji mercury sphygmomanometer
Ka ọ na-erule afọ 2020, a ga-enweta nlekọta ahụike n'efu na mercury n'efu, a ga-ejikwa nwayọọ pụọ na sphygmomanometer n'ụlọ ọgwụ. Ugbu a, ọ bụ naanị obere oge. Yabụ, n'ụlọ ọgwụ, anyị nwere ike ịhụ mgbe ụfọdụ na-eji mercury sphygmomanometer, oge ụfọdụ na-eji elektrọnik sphygmomanometer。
Ọtụtụ ndị enyi na ịdị adị nke eletriki eletrik, nke a bụ ihe a na-apụghị izere ezere, n'ihi na nyocha ọbara mgbali n'ahịa, enwere nsogbu ụfọdụ, mgbe ụfọdụ nha ezighi ezi, na-eduhie, iji mee ka onye ọ bụla nwee ọgba aghara, yabụ, ọtụtụ ndị ekweghị na igwe elektrọnik nyocha.
N'ezie elektrọnik ihe nlere nke ndị ezinụlọ anyị jiri mee ihe ziri ezi. Akwụkwọ niile gafere FDA, CE, ISO13485, Roahs wdg.
Ihe nlekota ndi elektrọnik nwere uru nke ha:
1. Enweghị Mercury, belata mbibi.
2, ọrụ dị mfe, dị mfe ịmụ ihe, mmadụ nwekwara ike ịrụ ọrụ.
3. Ọrụ ndekọ ọbara mgbali na ọrụ atụmatụ obi.
4, uru bara uru karị, ma e jiri ya tụnyere Mercury sphygmomanometer dị mma.
5. Sphygmomanometer elektrọnik na-eji usoro oscillographic eme ihe, nke na-atụle ọbara mgbali site na ịtụ nrugharị ọbara na-agbanye na mgbidi arịa ọbara.
Kedu otu esi eji elektrọnik elebanye anya nke ọma?
1. Mgbe ị na-adịghị eme ọsọ ọsọ iji tụọ, were izu ike maka nkeji 15. Mgbe ị na-atụ ọbara mgbali, nọdụ n'oche nke nwere azụ azụ dị jụụ, ọnọdụ dị jụụ, a na-atọpụ ọdịdị ahụ niile.
2. Wepu aka aka elu, tinye akpa ikuku na ogwe aka elu, akara ahụ kwesịrị iji ya na akwara obi; Akụkụ dị ala nke akpa kwesịrị ịdị 2 ~ 3cm n'elu ikpere.
3. Ogwe aka dị elu ga-aha nhata ka obi. Nọgide na-ekpo ọkụ iji gbochie ịma jijiji n'oge oyi.
4. N'ime usoro nyocha akụrụngwa akpaka, onye ọrịa enweghị ike ịme ihe ọ bụla, ma ọ bụghị na nrụgide nrụgide ahụ ga-ada ada n'ihi ebili ụgha nke mmegharị ahụ ike kpatara.
5. Oghere dị n'etiti nha abụọ ahụ kwesịrị ịbụ ihe karịrị nkeji 3, na ọnọdụ na ọnọdụ kwesịrị ịdị ka o kwere mee.
Nlekota obara obula dabere na nke ha, elekere eletriki mita bu ezigbo enyemaka!